पत्रपत्रिकाबाट – Page 39 – SidhaRekha
२०७३ असार २३, बिहीबार ०९:२५२०७३ असार २३, बिहीबार ०९:२५२०७३ असार २३, बिहीबार ०९:२५ by Ghanshyam Sagar
काठमाडौं, २३ असार । नेपाल सरकारको नीतिविपरीत र गृह प्रशासनको अनुमतिबेगर जन्मोत्सब मनाएको भन्दै प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाको जन्मदिनको कार्यक्रम बिथोलिएको छ। प्रहरी हस्तक्षेपपछि बाैद्धस्थित स्रोङचेन आवासिय विद्यालय परिसरमा लामाको ८१ औँ जन्मदिन मनाउन बुधवार भेला भएका झन्डै तीन हजार समर्थक आक्रोशित हुँदै फर्किएका हुन्। बौद्ध सेटलमेन्टका अधिकृत केल्साङसहित २४ तिब्बतीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। लामाका समर्थकले उक्त विद्यालय परिसरमा स्टेज बनाई सांस्कृतिक लगायत विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्ने तयारी गरेका थिए। काठमाडौं प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण सुवेदीले अनुमतिबिना कार्यक्रम गरेकाले रोक्न निर्देशन दिएको बताए। ‘प्रशासनले उनीहरुलाई कार्यक्रम गर्ने अनुमति दिएको छैन,’सुवेदीले भने,‘दलाई लामाको जन्मोत्सव मनाउन कसरी अनुमति दिन मिल्छ? जबरजस्ती गर्न खोजेपछि हामीले
२०७३ असार २२, बुधबार ०९:१२२०७३ असार २२, बुधबार ०९:१२२०७३ असार २२, बुधबार ०९:१२ by Ghanshyam Sagar
डा. केसीलाई अनशन नबस्न त्रिवि चिकित्सककै सुझाव
काठमाडौं, २२ असार । त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)का पदाधिकारी र विभागीय प्रमुखले प्रा. डा. गोविन्द केसीलाई अनसशन नबस्न आग्रह गरेका छन्। अनशन नै बस्ने भए आईओएम परिसरबाहिर बसिदिन उनीहरुको आग्रह छ। केसीले आइतबारदेखि अनशन बस्ने घोषणा गरेका छन्। पटक -पटकको अनशनले शिक्षण अस्पतालको स्वास्थ्य सेवामा अवरोध भएको र आइओएमको पठनपाठनमा पनि नकारात्मक असर परेकाले अनशनमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिएको अस्पतालका निर्देशक डा. दीपक महराले बताए। ‘हामीले सकेसम्म अनशन नै नबस्न आग्रह गरेका छौं। बस्ने नै हो भने पनि यसपटक पठनपाठनमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी आइओएम परिसरबाहिर बस्न अनुरोध गरेका छौं,’उनले भने। डिन कार्यालयमा डा. केसीसहित सोमबार र मंगलबार बसेको पदाधिकारी र विभागीय प्रमुखहरुको बैठकले अनशन नबस्न आग्रह गरेको हो। बैठकले अनशन नबस्न र बस्ने भए परिसरबाहिर जान लिखित आग्रह नै गरेको छ। बै
२०७३ असार २२, बुधबार ०८:४२२०७३ असार २२, बुधबार ०८:४२२०७३ असार २२, बुधबार ०८:४२ by Ghanshyam Sagar
सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गर्न गृहकार्य
काठमाडौं, २२ असार । नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूहले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत अन्य सबै द्विपक्षीय सन्धि र सम्झौतालाई एक्काईसौं शताब्दीअनुकूल पुनरावलोकन, अद्यावधिक र आवश्यक परे खारेज गर्न दुवै सरकारलाई सुझाव दिने सहमति गरेको छ । काठमाडौंमा मंगलबार सम्पन्न समूहको पहिलो बैठकले शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत द्विपक्षीय सन्धि र सम्झौतामा रहेका विवादको समाधान खोज्ने र दुवै सरकारलाई आगामी दुई वर्षभित्र संयुक्त प्रतिवेदन बुझाउन कार्यतालिका र एजेन्डा तय गरेको हो । प्रबुद्ध समूहको दोस्रो बैठक सेप्टेम्बर महिनाको तेस्रो साता भारतमा बस्ने जानकारी नेपाली प्रबुद्ध समूहका कार्यकारीनिर्देशक यादव खनालले अन्नपूर्णलाई दिए । ‘नेपाल र भारतबीचको शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिन हामी सहमत भएका छौं । अन्य सन्धि र सम्झौतामा देखिएका विसंगतिलाई अन्त्य गर्दै दुई देशबीचको ज
२०७३ असार २१, मंगलवार १४:२६२०७३ असार २१, मंगलवार १४:२६२०७३ असार २१, मंगलवार १४:२६ by Ghanshyam Sagar
संसद्मा परिपक्व भएर प्रस्तुत हुन देउवाको निर्देशन
काठमाडौं, २१ असार । कांग्रेस सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले संसद्मा प्रस्तुत हुँदा सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गरेरमात्रै धारणा राख्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । संसद्का विषयगत ११ वटा समितिका संयोजकहरूसँग सोमबार संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको बैठकमा देउवाले सांसदहरूलाई संसद्मा बोल्दा हचुवाका भरमा नबोल्न निर्देशन दिएका हुन् । देउवाले नयाँ संविधानअनुसार संसद्मा धेरै ऐन/कानुन निर्माण र संशोधनका विधेयक आउने भएकाले ती विधेयकमा गहन अध्ययन गर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘संसद्मा र संसदीय समितिहरूमा सांसदहरूले धारणा राख्दा त्यस विषयमा गम्भीर अध्ययन गर्नुस्', देउवाले निर्देशन दिँदै भने, ‘केही विषयमा थप बुझ्नुपर्ने भए सम्बन्धित क्षेत्रका अन्य सांसद वा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तासँग परामर्श गरेरमात्रै औपचारिक धारणा राख्नुस् ।' देउवाले ११ वटै संसद्को विषयगत समितिमा
२०७३ असार २१, मंगलवार १४:०३२०७३ असार २१, मंगलवार १४:०३२०७३ असार २१, मंगलवार १४:०३ by Ghanshyam Sagar
वैशाखयता बाढी-पहिरोबाट ३२ र चट्याङबाट ६२ को मृत्यु
काठमाडौं, २१ असार । वर्षातको समयमा आउन सक्ने प्राकृतिक समस्याको प्रभावकारी समाधान खोज्न संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले ‘समन्वयात्मक विशेष कार्यसञ्चालन केन्द्र’ स्थापना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका निकाय एवं संस्थाहरूलाई स्रोतसाधनसहित पूर्ण तयारी अवस्थामा राख्न र आपसी समन्वय प्रभावकारी बनाउन त्यस्तो केन्द्र बनाउन निर्देशन दिएको हो । सरकार, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बललाई सरकारले प्राकृतिक प्रकोपको पूर्वतयारीमा लाग्न निर्देशन दिएको हो । सरकारी निकायसँगको समन्वयमा विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन नेपाल रेडक्रसको पनि समितिले ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यस्तै, समितिले प्रकोपको समयमा उद्धार एवं राहतको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले औचित्यसहित माग गरेको बजेट उपलब्ध गराउनसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
२०७३ असार १८, शनिबार ०८:५०२०७३ असार १८, शनिबार ०८:५०२०७३ असार १८, शनिबार ०८:५० by Ghanshyam Sagar
काठमाडौं, १८ असार। मुलुकभर भएको भारी वर्षाका कारण बाढी पहिरोको जोखिम बढेको छ। बिहीबार रातिदेखि परेको वर्षाका कारण मुलुकका अधिकांश पहाडी जिल्लामा पहिलो जाँदा राजमार्गहरु नै बन्द भएका छन् भने तराईका जिल्लामा डुबान भएको छ। अबिरल वर्षासँगै भूकम्पले कमजोर बनाएको पहाडमा पहिरो जोखिम बढेको हो। बिहीबारदेखि परेको अबिरल वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोबाट मुलुकका विभिन्न भागमा ६ जनाको मृत्यु भएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार पहिरोबाट दार्चुलामा तीन, ललितपुरमा दुई र सर्लाहीमा खोलाले बगाएर एकजनाको मृत्यु भएको छ। बर्षापछि आएको पहिरोकै कारण नारायाणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड अबरुद्ध हुँदै आएको छ। लगातार तीन दिन भारी वर्षा भए पहाडी जिल्लामा भीमकाय पहिरोको सम्भावना रहेको विज्ञले औंलाएका छन्। केही दिनयताको वर्षाले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पहिरो जान थालेको छ। ‘पानीको मात्रा बढी भए जमिनले थेग्न सक्ने अवस्था छैन,’भूग
२०७३ असार १७, शुक्रबार ०८:३८२०७३ असार १७, शुक्रबार ०८:३८२०७३ असार १७, शुक्रबार ०८:३८ by Ghanshyam Sagar
काठमाडौं, १७ असार । डीभी, पीआर र ग्रिनकार्ड लिएका वा लिने प्रक्रियामा रहेका सामूदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीलाई जागिरबाट बर्खास्त गरिने भएको छ । बुधवार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आएको शिक्षा ऐनले सो ऐन लागू हुनुपूर्व यस्ता आवासीय अनुमति लिएकाको हकमा समेत लागू हुने गरी कानुनी व्यवस्था गरेको छ। ऐनले भुतलक्षित कानुन निर्माण गर्दै विगतमा यस्तो आवासीय अनुमति लिएकालाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याएको हो । निजामती ऐनले सरकारी कर्मचारीलाई डीभी, पीआर र गि्रनकार्ड लिन रोक लगाएपछि शिक्षा ऐनमा समेत यस्तो व्यवस्था गरी शिक्षकमाथि कडाइ गरिएको हो । संशोधित ऐनमा आवासीय अनुमति लिएका र लिने प्रक्रियामा रहेकाहरुले दुई महिनाभित्र फिर्ता गरेको अवस्थामा भने माफी दिन सकिने व्यवस्था छ । ‘सामूदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक वा कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यस्तो अनु
२०७३ असार १७, शुक्रबार ०८:२६२०७३ असार १७, शुक्रबार ०८:२६२०७३ असार १७, शुक्रबार ०८:२६ by Ghanshyam Sagar
काठमाडौं, १७ असार। राहदानीका लागि आवेदन दिएको दुई साताभित्रै जिल्लाबाटै साधारण शुल्कमा मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) उपलब्ध गराउने गरी सरकारले तयारी थालेको छ। राहदानी विभागले दोब्बर राजस्व तिरेपछि तीन दिनमा नै पासपोर्ट उपलब्ध गराउने भएपछि जिल्लाबाट पनि जतिसक्दो छिटो दिन दबाब परेको हो। जिल्लाबाट साधारणतया ५ हजार रुपैयाँ तिरेर ४५ दिनमा दिनुपर्ने पासपोर्ट नियमावलीमा उल्लेख भए पनि पछिल्लो सहजताको कारण जिल्लाले २५ दिनदेखि महिनादिनभित्र एमआरपी उपलब्ध गराउँदै आएका थिए। राहदानी आवेदन फारम जिल्ला जिल्लाबाट जम्मा गरेका १० दिनमा विभागले ल्याउने र विभागले १० दिनपछि राहदानी दिने गरेकोमा अब ७ दिनमा विभागमा ल्याउनु पर्ने र विभागले फारम आएको भोलिपल्टै दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो। कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ।
२०७३ असार १६, बिहीबार ११:३४२०७३ असार १६, बिहीबार ११:३४२०७३ असार १६, बिहीबार ११:३४ by Ghanshyam Sagar
काठमाडौं, १६ असार । विश्व बैंकले गरिबीको रेखाबाट माथि उठेको ठूलो नेपाली समूदाय पुनः गरिबीको रेखामूनि जान सक्ने खतरा औंल्याइएको छ। विश्व बैंकले नेपालको गरिबीबारे सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले बार्षिक २.२ प्रतिशतका दरले गरिबी घटेपनि गरिबीको रेखाबाट माथि उठेका ४५ प्रतिशत जनसंख्या जुनसुकै बेला पनि गरिबीमा फर्कन सक्ने चेतावनी दिएको छ। नेपालमा अझै पनि कुल जनसंख्याको २५.२ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकका बरिष्ठ अर्थशास्त्री शैलेश तिवारीले गरिबी निवारणका लागि रेमिट्यान्सले महत्वपूर्ण भूमिका निर्बाह गरेको बताए। ‘रेमिट्यान्स गर्दा नेपालीको जीवनस्तर माथि उकासिएको छ तर गरिब र धनीबीचको खाडल भने हटेको छैन,’उनले भने। प्रतिवेदनअनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको हिस्सा अत्यधिक बढेको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ।
२०७३ असार १५, बुधबार १२:१८२०७३ असार १५, बुधबार १२:१८२०७३ असार १५, बुधबार १२:१८ by Ghanshyam Sagar
मौसम अनुमान गर्न समुद्रमा रोबोट
काठमाडौं, १५ असार । नेपालसहित दक्षिण एसियाली मनसुन अनियमित र अस्तव्यस्त बनेपति अनुमानका लागि मनसुन सुरु हुने समुद्रमा रोबोट (ग्लिडर्स)छाडिएको छ । दक्षिण एसियामा मनुसुन सुरु हुने बंगालको खाडीमा भारतीय र ब्रिटिस वैज्ञानिकहरुले शनिबारदेखि सातवटा रोबोट छाडेका हुन् । रोबोटले समुद्रभित्र पानीको अवस्था र मनसुनका लागि चाहिने उपयुक्त तापक्रम,नुनको मात्रा, हाव तथा पानीको बहाव अध्ययन गर्नेछ । रोबटले उपलव्ध गराउने तथ्यांकका आधारमा मनसुन अनुमान बढी विश्वस्तरीय बनाउन सकिने वैज्ञानिक दाबी छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा जलबायु तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका पूर्वप्रमुख मणिरत्न शाक्यले भारतीय वैज्ञानिकहरुले गर्ने मनसुन अनुमानको प्रत्यक्ष र बढी फाइदा नेपालले लिन सक्ने बताए । बंगालको खाडीबाट उत्पन्न हुने मनसुन प्रणाली नेपाल हुँदै पाकिस्तानतिर जान्छ, यसले नेपालमा समेत मौसम अनुमान सहज हु